u-Dillon du Preez uqokwe njengosekela mqeqeshi wama-Momentum Proteas
Tue, 08th September 2020
Lo owayeyi-all-rounder kwi-Free State nama-VKB Knights, owathatha umhlalaphansi ngo-2017, usayine inkontileka yeminyaka emithathu futhi uzodlala ngaphansi komqeqeshi omkhulu u-Hilton Moreeng emuva kokuphinde aqokwe ngo-Julayi.
Eneminyaka ewu-38, unesipiliyoni esiningi kumdlalo, wakhipha izinti ezicishe zifike ku-600 kuzona zonke izinhlobo zekhilikithi futhi wathola ama-runs adlulile ku-4 500. Ebeqeqesha i-Free State nama-VKB Knights selokhu athatha umhlalaphansi futhi ukukhushulelwa kwizigaba ze-Cricket South Africa (CSA) kuqinisa iqembu labaphathi. u-Du Preez unesipiliyoni esiningi kwikhilikithi yabesifazane njengoba aba usekela mqeqeshi weqembu i-Coronation kwi-Women’s T20 Super League yokuqala.
Ngaphansi kokuholwa u-Moreeng, ophathe kusukela ngo-2012, iqembu labesifazane liphenduke iqembu elincintisanayo enkundleni yomhlaba. Bafika kuma-semi-finals kwi-ICC Women’s T20 Cup (2014 no-2020) kanye ne-ICC Women’s World Cup (2017). Kulandela ukunqoba nge-whitewash okwaguba umlando behlula i-New Zealand ngo-Januwari, iqembu lakhe laqede njengelesithathu benamaphuzu awu-25 emuva kwe-Australia (39) ne-England (27) kwi-ICC Women’s Championship futhi bangena kwi-World Cup onyakeni ozayo.
“Besithanda ukwamukela u-Dillon kuma-Momentum Proteas,” kuphawula umqeqeshi wama-Momentum Proteas, u-Hilton Moreeng. “Ungumqeqeshi osemncane kodwa onesipiliyoni esiningi sokudlala umdlalo futhi ikhono lakhe lokuba i-all-rounder lizosiza amantombazane.”
“Ngiyathemba ukuthi kanye nabasebenzi bethu kanye nokuqokwa kwa-Dinesha Devnarain (umqeqeshi wokuqala ogcwele wabesifazane ama-Under-19) abaqeqeshi bethu bangasiza ukubeka umdlalo wabesifazane kwelinye izinga elisha.”
Ekhuluma ngokuqokwa kwakhe, u-du Preez uthe: “Ngihlonishwe kakhulu. Bengilifisa ithuba elifana naleli futhi sengikulindele ukuqala.”
“Kuningi obekwenzeka emfihlakalweni isikhathi eside manje futhi njengoba bekunekhefu (Covid-19) bekumele ngilinde isikhashana ngaphambi kokuthi ngihlangane neqembu, kodwa manje sekufikile futhi ngijabule kakhulu futhi sengikulindele ukusebenza no-Hilton kanye namantombazane.”
Ayikho ikhilikithi yamazwe okwamanje edlalwa eNingizimu Afrika ngenxa yokuvinjwa i-COVID-19. Kwakumele ama-Momentum Proteas avakashele e-West Indies nase-England ezinyangeni ezidlule, kodwa kwakumele uhambo luhlehliswe ngenxa yegciwane.
Nokho, kwabakhona amakhempu amabili abandakanya iqembu lesizwe le-High Performance, eyesithathu kumele ibekhona ngasekupheleni kwenyanga u-Septemba e-Potchefstroom.
Ukubuya kwa-Kapp no-Chetty kuqinisa ama-Proteas i-India inwebe ukuba ngaphezulu kwama-Proteas Women Ama-Proteas Esifazane anethuba lokubuyela kwimidlalo Ama-Proteas aphumule futhi alungele uvivinyo Ukuhlasela kwa-Lee kuhlela umdlalo ozocacisa nge-series u-Luus no-Moreeng bakhaliswa ukungazinzi behlulwa kwi-T20I yesithathu U-50 ka-Kapp no-Lee kulinganisa i-T20 series All-round Nida Dar puts Pakistan 1-0 in T20 series Ama-Proteas esifazane azimisele ngokuthuthuka kuyela kumdlalo wokuqala we-T20 series enemidlalo emihlanu u-Moreeng usekela ukuqina komqondo kwi-South Africa kanye nekhono lokubuya kahle kuyela kwi-WODI yesibili u-Kapp uyakujabulela ukufika ukuqopha umlando kumsebenzi wakhe